Iyo iPhone 7 inodzinga iyo 3,5 mm jack uye isu tinokuudza iwe pavhidhiyo | IPhone nhau
Iyo 3,5-millimeter odhiyo jack uye iyo iPhone 7 [vhidhiyo]
Iyo iPhones 7 uye 7 Plus vatove pakati pedu. Kunyangwe paine kukakavadzana kwekuburuka kwavakave nako munyika medu, ine shoma kwazvo stock mune mazhinji mamodherus (dzinenge dzisipo kune vamwe), pane vatove vashandisi vazhinji vanogona kunakirwa neApple chishandiso.
Ichokwadi kuti isu takatarisana neyakanakisa iPhone yakambogadzirwa, ine huwandu hwakanaka hwezvinhu zvinosanganisirwa mune aya mamodheru matsva. Zvisinei, chimwe chinhu chatisingaone chakabatanidzwa ndicho chinozivikanwa 3,5 mm chinongedzo chekuteerera kumimhanzi kuburikidza neyakajairwa mahedhifoni. Zvakawanda zvataurwa uye zvakanyorwa semhedzisiro yesarudzo iyi neavo vaCupertino, vaine nzvimbo zhinji mukuda sekurwisa.
En ichi chinyorwa, Ndakakuudza asati aenda nei isiri mutambo wekuti isu hatichaone ichi chinobatanidza pazasi pe iPhone yedu. Kamwe naye muruoko, chaizvo Kunzwa kuri kuti kusave nekuwedzera uku kubva zvino zvichienda kunotibata nenzira yakaipa. Isu tinorasikirwa nemukana wekuchaja iyo iPhone uye nekuteerera mimhanzi panguva imwe chete, pamwe nemukana wekubatanidza edu akajairwa mahedhifoni pasina kukosha kwekushandisa iyo adapta inowanikwa mubhokisi, ichokwadi. Kunyangwe zvakadaro, uye kunyangwe nevaya vanozivisa kupera kwenyika nekuda kwechikonzero ichi, divi remabhenefiti rinoramba richiyera kupfuura zvakaipira.
Iyo 3,5mm odhiyo jack yakaenda kubva ku iPhone uye haisi kudzoka. Tinogona kucherechedza kweminiti yekunyarara kwaari, asi pasi pemoyo tinoziva kuti zvaive zvakanaka kumurega aende. Ticharasikirwa nazvo here? Pamwe Kana pamwe kwete.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo 3,5-millimeter odhiyo jack uye iyo iPhone 7 [vhidhiyo]
Fer F akadaro
Uye ndezvipi zvingave zvakanakira shanduko iyi? nekuti zvakandiomera kuti ndinzwisise chikamu ichocho
Pindura Fer Fer
Izvo zvakanakira kuti iwe unotenga imwe neBluetooth paBay inova € 10 warros uye iwe unokanganwa nezve tambo, usakanganwa kuti jack yakura kupfuura fodya, ngatiende kumberi kufadza ndapota ...
Fer unofanirwa kunzwisisa nyaya ye "shanduko." Wese munhu akati sei kuisa USB-C muMacbook, uye zvino munhu wese ari kuzvichinja ... Munhu wese akati nei 64Bit processor ... uye ikozvino munhu wese ari kuzvichinja ... Minijack connector ichiripo nekuti indasitiri haiiti inochinja. ... kudzamara yarohwa uye mabhatiri akaiswa ... ipapo zviyero zvinotanga kuchinja ... Mumakore matatu rangarira iyi komendi uye funga kuti nei iri Apple yakatanga neshanduko iyi cambio
Motorola yakatanga, ne Motorola Z.
Ini ndatova mumwe wevane rombo rakanaka kuve ne7, ndasvika mangwanani ano uye zvimiro zvekutanga zvakanaka, bhatani repamba rinoshamisa panguva ino, handina kuwana chero mhosva yeavo vakataurwa, ini ndichamhan'ara zvikanganiso , nyaya yemahedhifoni ... Inoridza ini ndinogara ndichienda nemota, inova ndiyo yakanakisa iPhone kudhara, hongu, asi segore rega rega panoburitswa imwe nyowani, ndiyo yakanakisa
AG Dhiraivha - mumwe weakanakisa emitambo yekumhanya seye app yevhiki